Uyifumana njani kwaye uyisebenzisa njani iKhowudi yeAirtime yasimahla yeTracFone - Iselfowuni Iikhokelo Neendlela Zokusebenza
Uyifumana njani kwaye uyisebenzisa njani iiKhowudi zeAirtime zaMahala
Iikhowudi ze-airtime zasimahla zeTracFone zikufumanela ixesha elongezelelekileyo lokuthetha kwifowuni yakho. Zininzi iindawo kwi-intanethi apho unokufumana khona iikhowudi zokugcina imali ngeTracFone yakho.
Sebenzisa ukuKwandiswa kweTracFone
Eyona ndlela ilula yokufumana iikhowudi ze-airtime zasimahla kuxa uqala ukubhalisela ifowuni yakho entsha kuba zininziUkunyuswa kweTracFoneiyafumaneka. Ayizizo zonke izibonelelo ezizodwa ezigcinelwe abathengi abatsha nangona. Unokufumana iikhowudi zemizuzu yebhonasi kwi-intanethi. Iikhowudi zifuna ukuba uthenge imizuzu ukuze ufumane imizuzu yasimahla kungoko usazodinga ukuchitha imali.
Joyina uLuhlu lweePosi zeTracFone
Enye indlela yokufumana ikhowudi kuku setha iakhawunti KwiTracFone.com. Ungangenisa idilesi ye-imeyile ukufumana unyuselo, kubandakanya iikhowudi zemizuzu yasimahla. Ezi zibonelelo zibonelela ngamalungu oludwe lwee-imeyile ngezivumelwano ezintle kunye nokonga.
Fumana iikhowudi zeAirtime zaMahala zeTracFone kwezinye iiWebhusayithi
Ezinye iiwebhusayithi zinokufuna ukuba uthenge kwaye usebenzise ifowuni entsha, kodwa imizuzu eyongezelelweyo isimahla. Abanye bancamathisela imizuzu yebhonasi kweyakhoukuthengwa kwemizuzu ye-airtimekwifowuni yakho. Ukuba usebenzisa ikhowudi oyifumene kwi-intanethi, qiniseka ukujonga imihla ekhowudi eposwe ngayo kuba iikhowudi ziphelelwa lixesha.
Naziphi na iikhowudi
Zininzi iikhowudi zidweliswe kule ndawo kubandakanya izibonelelo ezinje ngokufumana imizuzu engama-60 simahla xa kuthengwa imizuzu engama-60 okanye engama-120. Kukho izaphulelo kumakhadi edatha, njenge- $ 15 ye-500 MB. Ukuba ujonge ukuthenga ifowuni eneemizuzu, kukho iikhowudi zokukhuthaza nazo.
Ibhokisi yekhuphoni ubonelela ngeekhowudi ze-airtime zasimahla ezidityaniswe nokuthengwa kwemizuzu. Umzekelo, unokufumana imizuzu engama-30 simahla ukuba uthenga imizuzu engama-120. Iikhowudi ezintsha zihlaziywa rhoqo, kwaye unokubona iintlobo zeekhowudi ezibonelelweyo eziphelelwe lixesha. Ukuba ubhalisela ileta yeendaba, unokufumana izaziso xa kongezwa iikhowudi ezintsha.
Ikhuphoni Cabin Uluhlu lweekhowudi zentengiso yefowuni kunye nemizuzu yasimahla. Zidwelisa neekhowudi eziphelelwa lixesha. Unokuhlela iikhowudi ngokutsha, ukuthandwa, kunye nokuphelelwa lixesha kungekudala.
Izaphulelo zokuthengwa kweefowuni kunye nemizuzu ziyafumaneka kwi Ikhuphoni eyiNtloko . Umzekelo wekhowudi yekhuphoni yimizuzu engama-20 yasimahla ukuba uthenga ikhadi lemizuzu engama-60, okanye imizuzu engama-30 yasimahla. Abasebenzisi bendawo banokufaka iikhowudi abazifumeneyo ukuze bazisebenzise abanye.
Izivumelwano zoTata Yiforum evumela abasebenzisi ukuba bathumele iikhowudi zasimahla abadibana nazo. Iiforamu azisebenzi kakhulu, ke ukubheja kwakho okona kulungileyo ziziza zekhowudi yekhuphoni.
Iikhowudi kwi Ndithengise zihlaziywa rhoqo, kwaye unokufumana ingxelo ngeyona nto isebenzayo. Zimbini izinto zokuthenga iifowuni kunye nemizuzu yasimahla yokuthengwa kwemizuzu kwisiza.
Umvavanyi weTracFone Uluhlu lweekhowudi ezihlaziyiweyo rhoqo ngenyanga. Njengazo zonke iisayithi, iikhowudi zezokuthengwa kwemizuzu kunye nenani elithile lemizuzu yasimahla. Iikhowudi zihlanganiswe kuluhlu olulula, olwenza ukuba kube lula ukuzifumana.
Kukho iikhowudi ezintsha ezongezwa rhoqo ngenyanga kwifayile ye- IValpak indawo. Ukongeza kwizaphulelo kwiikhowudi zasimahla ezithengwe ngemizuzu, zikwabonelela ngezaphulelo kwiodolo yeefowuni.
Cinga ngoku kulandelayo xa usebenzisa iikhowudi zeTracFone.
Ifowuni xa ithelekiswa neWebhusayithi
Kuya kufuneka utyelele Iwebhusayithi yeTracFone ukufaka iikhowudi zakho okanye ukuzongeza ngqo kwiTracFone yakho. Umngcipheko wokongeza iikhowudi ngqo kwifowuni yakho kukuba ngaba ikhowudi ayisebenzi, unokugqibela ngokuthenga imizuzu ngaphandle kwesibonelelo sasimahla. Omnye umba kukuba iikhowudi azisoloko zikhuselekile ukuzisebenzisa, ke eyona ndlela yokuyongeza kukuya kwiwebhusayithi.
Zama iikhowudi ezininzi
Kuya kufuneka uzame iikhowudi ezininzi de ufumane enye esebenzela isicwangciso sakho kunye nefowuni. Unako ukufowunela iTracFone kwaye iikhowudi zongezwe kwifowuni.
Gcina ifowuni yakho ivuliwe kwaye ube nomonde
Xa ufaka ikhowudi okanye ukongeza imizuzu kwifowuni yakho, kubalulekile ukuba iTracFone yakho ivulwe. Ngelixa imizuzu inokongezwa kwangoko, inokuthatha ukuya kwiiyure ezingama-24 ukuba ikhowudi yentengiso yongezwe kwifowuni yakho.
Funa kwaye uyakufumana
Zininzi iikhowudi zexesha lomoya zasimahla ezikhoyo kwiTracFones, nokuba useta iakhawunti entsha okanye ulungilekulayishwa eminye imizuzukwifowuni yakho. Qiniseka ukuba ukhangela ngokukhawuleza phambi kokuba ungeze i-airtime ukuze ufumane esona sivumelwano sihle, uhlawula ngaphantsi xa kuthelekiswa ngomzuzu.
I-Asperger Syndrome Ukucoca Imiboniso Yeslides Ukuthenga Kwi-Intanethi Health And Special Iimfuneko I-Origami Izixhobo
Ungathetha ngantoni ngexesha lobuso nomfana
leliphi icala elephule imoto
Ungaya njani ngqo kwi-voicemail yomntu
UTom hanks kunye nemuvi bhanyabhanya
Inja enkulu inkulu emhlabeni inama-hercule angama-282 eepilisi zesingesi
ukucoca njani iikhabhathi zomthi ngeviniga